K/ Galbeed oo qabaneyso doorashada 5 kursi – Yaa ku tartamaya? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii K/ Galbeed oo qabaneyso doorashada 5 kursi – Yaa ku tartamaya?
Baydhabo (Dalkaan.com) – Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa maanta ka dhaceyso doorashada 5 kursi oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka ee ka imaanaya dhinaca dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Guddiga hirgelinta doorashada ee Koonfur Galbeed oo haatan wada qaban qaabadii ugu dambeysay ee doorashada ayaa soo gabagabeeyey diiwaan-gelinta xubnaha musharixiinta ah ee u tartamaya kuraasta maanta doorashadooda ay ka dhaceyso magaalada Baydhabo.
Kuraasta doorashadooda la qabanayo ayaa kala ah HOP#188, HOP#185, HOP#175, HOP#159 iyo HOP#177, kuwaas oo deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed.
Sidoo kale waxaa kuraastan ku tartami doono musharixiinta kala ah: 1: HOP#188 waxaa ku tartami doono Cabdisamed Aadan isaaq & Maxamed Cabdi Maxamed, waxaana horey ugu fadhiyey xildhibaan Aadan Ibraahim Dhayow.
2: HOP#185 waxaa ku tartami doono Maxamed Nuur Maxamed iyo Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed, waxaana horey ugu fadhiyey xildhibaan Cali Aadan Xuseen.
3: HOP#175 waxaa ku tartami doono Aadan Maxamed Ibraahim iyo Cabdirishiid Nuur Jilley, waxaana horey ugu fadhiyey xildhibaan Axmed Xaaji Maxamed Taaw
4: HOP#159 waxaan ku tartami doono Maxamed Bare Maxamuud & Cabdullaahi Maxamed Isaaq, waxaana kursigan horey ugu fadhiyey Xildhibaan Xasan Ibraahim Maxamed.
5: HOP# 177 waxaa ku tartami doono Maxamuud Abuukar Kheyre & Cabduqaadir Sheikh Cali Baraka, waxaana horey ugu fadhiyey Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaroow
Koonfur Galbeed ayaa dardargelineysa doorashada Golaha Shacabka, waxaana shalay ay ku dhowaaqday deegaan doorashada labaad ee Baraawe oo lagu qabanayo 13 kursi oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ee lagu dooranayo halkaasi.
Khasaare Malaayiin Dollar ah oo ka dhashay dabkii ka kacay Hargeysa
Hargeysa (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab xoogan oo Abaare 8-dii fiidnimo ee xalay ka...
QISO AAD U XANUUN BADAN IYO WIIL SOMALI AH. #SUBSCRIBE
Waddan ka carooday in magaciisa lagu daray liis ay ku jirto...
Kevin De Bruyne oo yidhi: “Waxaan jeclaan lahaa ku guuleysiga Premier...
Inter 2-1 Venezia: Dzeko oo Nerazzurri ka Caawiyay guul Waqti Danbe...
Taliyihii amniga degmada Dayniile iyo askar ilaalo u aheyd oo qarax...
Chelsea oo isku arki doonta Real Madrid wareega 8da ee Champions...
Taliye C/Xamiid oo mar kale hadal heyn dhaliyey – Halkee ku...